Zimrights Masvingo Chair Faces Prosecution – RadioVop Zimbabwe
Zimrights Masvingo Chair Faces Prosecution
Hita was arrested in April for a photo exhibition entitled “Reflections” in Masvingo and charged with “holding a public meeting without notifying the authorities.”
Hita’s lawyer Blessing Nyamaropa of Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) told Radio VOP that Masvingo area public prosecutor identified as Shumba advised him that Tomana had given him the authority to proceed with the trial once the court set the trial date.
Shumba advised Nyamaropa that he will use the seized photos as exhibits during the trial.
The prosecution of Hita comes hardly a fortnight after Tomana authorised the prosecution of Bulawayo’s Gukurahundi visual artist Owen Maseko. Maseko will stand trial in August for allegedly undermining the authority of or insulting President Robert Mugabe.
Previous PostMom Dies While Snow SightseeingNext PostIndependent Monitors Assaulted